नगर प्रमुख र उप प्रमुखको विवादले झडप ! « News24 : Premium News Channel
नगर प्रमुख र उप प्रमुखको विवादले झडप !
धनुषा । हंसपुर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षधरबीच आज भएको विवाद झडपमा परिणत हुँदा स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ । झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीको लाठी चार्जबाट उपप्रमुखसहित आधा दर्जन घाइते भएका छन् ।
झडपका क्रममा उपप्रमुख झासहित वडा नं २ बघचौडाका अध्यक्ष उदय साह, तपेश्वर मण्डल, फेकन कापर, पुण्य खत्रीलगायत घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये मण्डलको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनको थप उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल ल्याइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार उपप्रमुखको कार्यालयबाट सामग्री लग्न प्रहरीसँगै प्रमुख मण्डल करीब ६० जनाको समूहका साथ आउनुभएको थियो । घरेलु हातहतियारसहित उनीहरु दुई वटा ट्याक्टरमा आएका थिए । उपप्रमुख पक्षधरबाट स्थानीयले प्रतिकार गर्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको हो ।
स्थिति तनावपूर्ण बनेकाले तारापट्टी, बेलही, धनुषाधामलगायतका प्रहरी चौकीबाट दर्जनौँको सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।